Roll yekugadzira muchina, Slitting & CTL muchina - Linbay
B Deck Roll Kugadzira Machine
Floor uriri TR80 rwakapetwa Anoumba muchina
LINBAY MACHINERY inogadzira sei panguva yeCOVID-19?
Kuiswa kwemuchina wekugadzira muchina panguva yeCOVID-19 ndeye mahara!
Apa LINBAY ichatsanangura maitire atinoita kuiswa kwedu roll yekugadzira muchina.
Kutanga, isu tinogadzirisa muchina mune yedu chirimwa, isu tinobvunza kuti ndeupi saizi iwe wauchazogadzira kutanga, isu tinoisa muchina muhukuru iwo uchazogadzira uye kugadzirisa ese akakodzera ma parameter pamberi pekutumirwa, saka haufanire chinja chero chinhu kana wawana muchina uyu.
Chechipiri patinobvarura muchina wekugadzirisa dambudziko, tinotora mavhidhiyo kuitira kuti iwe uzive kuabatanidza. Muchina wega wega une vhidhiyo yawo. Muvhidhiyo, icharatidza maitiro ekubatanidza tambo nemachubhu, kuisa mafuta, kuisa pamwechete zvimiro zvemuviri nezvimwe…
Heino muenzaniso weiyo vhidhiyo: https://youtu.be/p4EdBkqgPVo
Yetatu, kana iwe uchinge wagamuchira iyo michina, iwe unenge uine wahtsapp kana wechat boka, mainjiniya edu (Anotaura Chirungu neRussia) uye ini (ndinotaura Chirungu neSpanish) ndichave muboka kuti ndikutsigire mune chero kukahadzika.
Chechina, tinokutumira bhuku rechirungu kana reSpanish kuti unzwisise zvese zvinoreva mabhatani uye maitiro ekutanga muchina.
Tine nyaya yekuti mutengi wangu anobva kuVietnam akagamuchira muchina wake musi waNovember 25, ndokuuisa pamoto usiku, ndokutanga kuburitsa musi waNovember 26. Uye pamusoro peizvi, takawana budiriro zhinji mukuisa michina yakaoma. Iko hakuna dambudziko nekugadzwa kwemuchina wako. LINBAY inopa yakanakisa mhando uye yakanakisa sevhisi kune vedu vatengi, kunyanya mune ino mamiriro. Haufanire kumirira kusvikira COVID yapfuura. Unogona kuburitsa ma profiles ipapo nemichina yedu.
Rori Fender Roll Achigadzira Machine
LINBAY-Exportar Máquina Perfiladora de...